I-Ceramic flat yokukhipha i-disc yomshini wekhofi China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Ceramic Grinding Burr > I-Ceramic Conical Burr ye-Coffee grinder > I-Ceramic flat yokukhipha i-disc yomshini wekhofi
I-Ceramic flat yokukhipha i-disc yomshini wekhofi
Ukukhiqiza: 50,000 sets/month
Amandla Wokunikezela: 200,000 sets/month
I-ceramic disc yokugaya i-flat isetshenziswa kakhulu kumshini wekhofi wase-espresso, okwenza ukuba inselelo igwetshwe emzimbeni .
Izinto ezisemqoka esizisebenzisayo zi-alumina kusuka ku-95% kuya ku-99% i-alumina, le nto iyamangalisa ezindaweni zayo ezivelele, njengokumelana nokugqoka okukhulu, ukusebenza kahle kwe-abrasive, ubumukhuni obukhulu nokuqina, okubiza izindleko nokusebenza kahle. Ngenxa yendlela yokukhiqiza umjovo futhi ucindezele, ukusebenza kahle kokukhiqiza kuphakeme kunokwenziwa kwe-CNC ngensimbi yokugaya i-disc. Futhi kulula kakhulu ukuhlangana nomshini wekhofi.
Siye sanikeza i-disk yokukhishwa kwe-ceramic ye-standard standard, futhi siyakwazi ukuyikhiqiza ngemfuno ekhethekile yomthengi noma ubukhulu obukhulu. Ububanzi obuningi obungaphandle esingakwazi ukuqhubeka bungaba ngu-130mm.
I-Al2o3 I-Disc Milling Disc
Disc Dilling Flat for Coffee Machine
I-Al2o3 I-Ceramic Grinding Burr
I-Al2O3 I-Ceramic Faucet Discs